Daraasadda Koowaad ee Aadanaha ee Musharax cusub oo COVID-19 ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Daraasadda Koowaad ee Aadanaha ee Musharax cusub oo COVID-19 ah
Si wanaagsan loo dulqaatay oo astaan ​​badbaado oo wanaagsan, ma jiro SAE ama TEAE taasoo horseedaysa joojinta hore, ma jiraan calaamado muhiim ah oo aan caadi ahayn/natiijooyinka baaritaanka shaybaarka ee leh muhiimada caafimaad
20μg ReCOV waxay keentay titer sare oo ah anti-SARS-CoV-2 ka-hortagga unugyada difaaca jirka, oo leh ugu yaraan heer la barbardhigi karo xogta la daabacay ee tallaallada mRNA, saadaalinta waxtarka rajo-gelinta ah ee ReCOV ee ka hortagga cudurrada ay keento SARS-COV-2
ReCOV waa lagu sii qiimayn doonaa waxtarka iyo badbaadada ee tijaabooyinka caafimaad ee waaweyn dhawaan
Kooxdani waxa ay diiwaangelisay 25 ka qaybgalayaal kuwaas oo ahaa 18 ilaa 55 sano jir. Tijaabada, SARS-Cov-2-dhexdhexaadinta antibody-ka celceliska celceliska titers-ka (GMTs) ayaa loo beddelay WHO/NIBSC unugga IU/mL marka la barbardhigo ka-hortagga titer-ka-hortagga unugyada iyo kuwa tallaallada kale ee aadka loo isticmaalo. Recbio wuxuu helay GMTs 1643.2 IU/mL si looga takhaluso unugyada difaaca jirka 14 maalmood ka dib laba qiyaasood oo ReCOV ah, iyadoo labadaba heerka seropositive (SPR) iyo heerka seroconversion (SCR) ay yihiin 100%, taasoo soo jeedinaysa waxtarka ReCOV ee ka hortagga SARS-COV-2 cudurada keena. SARS-CoV-2 ka-hortagga unugyada difaaca jirka waxaa sameeyay shaybaadhka dhexe ee daraasadda (360Biolabs). Sida laga soo xigtay daraasad dhowaan la daabacay ka hor1, GMT ee SARSCoV-2 ka-hortagga unugyada difaaca jirka waxay ahaayeen 1404.16 IU/ml iyo 928.75 IU/ml 14 maalmood ka dib laba qiyaasood oo tallaalka Moderna iyo BioNTech/Pfizer mRNA, siday u kala horreeyaan.